Gospel: Luke 1: 39 - 56 ( Magnificat)
မယ်တော်သခင်မ ကောင်းကင်ဘုံသို့ ပင့်ဆောင်ခံရခြင်းပွဲနေ့မှာ မင်္ဂလာအပေါင်း ခညောင်းပါစေ လို့ မေတ္တာပို့သပါတယ်။ ဒီနေ့မှာ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ မယ်တော်ရဲ့ကြီးမြတ်တော်မူခြင်းကို ဂုဏ်ပြုကျင်းပဖို့ စု ဝေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ နာဇရက်မြို့က သမီးကညာလေးဟာ ဒီကနေ့မှာ မြင့်မြတ်တဲ့ဂုဏ်ပြုခြင်းကို ခံယူဖို့ ချီးမြှောက်ခြင်းခံရပါတယ်။ မယ်တော်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ဟာလည်း မယ်တော်နဲ့ အတူ ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းချီးတော်တွေကို ခံစားနေရပါပြီ။
မယ်တော်သခင်မဟာ လောကအသက်တာကုန်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာ ခန္ဓာရော၊ ဝိညာဉ်ပါ ကောင်း ကင်ဘုံကို ပင့်ဆောင်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ မယ်တော်ဟာ ထာ၀ရအဆက်ဆက်တည်တော်မူတဲ့ ဘုရားသခင် ကို ဖွားမြင်ပေးသူဖြစ်တာကတစ်ကြောင်း၊ အပြစ်ရဲ့အကြေးအညော်နဲ့လည်း ကင်းစင်တာကတစ်ကြောင်း တို့ကြောင့် သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ သာမန်လူတွေလို ပုပ်သိုးပျက်စီးဖို့ မထိုက်တန်ပါဘူး။ မယ်တော်ဟာ အပြစ်မဲ့သန္ဓေယူခဲ့ရုံမျှမက သူ့ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးမှာလည်း အပြစ်ကို ရှောင်ကြဉ်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ]]အပြစ်၏အဖိုးအခကား သေခြင်းပင်ဖြစ်၏}}လို့ (ရောမ ၆း၂၃)မှာ ဆိုထားတဲ့အတိုင်း မယ်တော်ဟာ အပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တဲ့အလျောက် လောကအသက်တာကုန်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာ ခန္ဓာရော၊ ဝိညာဉ်ပါ ကောင်းကင်ဘုံကို ပင့်ဆောင်ခံရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
မယ်တော်ကို ချီးမြှင့်တဲ့ဂုဏ်ပုဒ်တွေထဲက တစ်ခုကတော့ ]]သဟာဖွဲ့ရာ သေတ္တာတော်}}ဆိုတဲ့ ဂုဏ် ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ရှုကြားနာခဲ့တဲ့ပထမကျမ်းမှာ ရှင်ယောဟန်က ကောင်းကင်ဘုံကို ရူပါရုံ မှာ မြင်ခဲ့ရပြီး ထူးခြားတဲ့နိမိတ်လက္ခဏာတွေကို တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ သဟာဖွဲ့ရာသေတ္တာတော်ကို လည်း တွေ့ခဲ့ပါတယ်။
]]ကောင်းကင်၌ ကြီးစွာသော နိမိတ်လက္ခဏာဟူမူကား မိန်းမတစ်ဦးသည် နေကို ဝတ်လျက်၊ လကို ခြေဖြင့် နင်းလျက်၊ မိမိခေါင်းပေါ်၌ ကြယ်တစ်ဆယ့်နှစ်လုံးဖြင့် ပြီးသောသရဖူကို ဆောင်းလျက် ပေါ်လာ၏။}}
ရှင်ယောဟန်မြင်ခဲ့ရတဲ့ ဗျာဒိတ်ရူပါရုံမှာ အမျိုးသမီးဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားပြီး သားယောက်ျm; ကို ဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ နဂါးကြီးက သားဖြစ်သူကို စားဖို့ စောင့်နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘုရားသခင်ရဲ့စောင်မမှုကြောင့် မိခင်ရော၊ ကလေးပါ အသက်ချမ်းသာရာရခဲ့ကြတယ်။ ရှင်ယောဟန်မြင် တွေ့ခဲ့ရတဲ့ ဗျာဒိတ်ရူပါရုံဟာ ဓမ္မဟောင်းကနေ ဓမ္မသစ်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ အစ္စရာအဲလ်အမျိုးအနွယ်ကနေ အသင်းတော်မွေးဖွားလာပုံကို ဖော်ညွှန်းခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ကျွန်ုပ်တို့နားလည်ထားပါတယ်။ နဂါးကြီးဖြစ်တဲ့ ဆာတန်နတ်ဆိုးနဲ့ သူ့အပေါင်းအပါတွေကလည်း အသင်းတော်ကို ဖျက်ဆီးဖို့ ကြံရွယ်နေကြပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကပ်ရောဂါဆိုးကျရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ မယ်တော်သခင်မ ကောင်းကင်ဘုံသို့ ပင့် ဆောင်ခံရခြင်းပွဲကို ကျွန်ုပ်တို့ကျင်းပနေကြပါတယ်။ ဒီကပ်ရောဂါဟာ နဂါးကြီးလိုပဲ လူ့အသက်တွေကို ဖျက်ဆီးဖို့ ချောင်းမြောင်းနေပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်မဖို့အတွက် အမိမယ်တော်ကတစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ ဆုတောင်းကြပါတယ်။ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့် သေဆုံးတဲ့လူအရေအတွက်များလာတဲ့အချိန်ကတည်းက စပြီး ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဖရန်စစ်က လူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ မယ်တော်ဆီ အပ်နှံခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာပုပ်သိုးပျက်ဆီးမှုလုံး၀မရှိဘဲ ကောင်းကင်ဘုံကို ပင့်ဆောင်ခြင်းခံရတဲ့ အမိ မယ်တော်ဟာ ကျွန်ုပ်တို့ကို ကာကွယ်ပေးဖို့ အဖဘုရားသခင်ဆီ ကြားဝင်တောင်းလျှောက်ပေးပါစေ။
ကက်သလစ်တွေအဖို့ကတော့ ကြားဝင်တောင်းလျှောက်ပေးမယ့် မိခင်မြတ်တစ်ပါးရှိနေတာဟာ ဝမ်းသာစရာပါ။ သမ္မာကျမ်းစာထဲမှာ ဧလိဇဘက်ကိုယ်တိုင်က ]]ကျွန်ုပ်သခင်၏မယ်တော်}}ဆိုပြီး ချီးမွမ်းခဲ့ ရတဲ့မယ်တော်ကို တန်ဖိုးမထားချင်တဲ့ အခြားသောခရစ်ယာန်တွေကို သနားတဲ့စိတ်လည်း ဖြစ်မိပါတယ်။
ဒီကနေ့ ကျင်းပတဲ့ပွဲဟာ ကယ်တင်ခြင်းသမိုင်းမှာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့အခန်းကဏ္ဍကို ပေါ်လွင် စေပါတယ်။ သမ္မာကျမ်းစာထဲမှာ အမျိုးသမီးတွေကနေတစ်ဆင့် အံ့ဖွယ်ရာတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့တာ တွေ့ရ ပါတယ်။ ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတန်ခိုးတော်ဟာ ထူးခြားတဲ့အမျိုးသမီးတွေ၊ သားသမီးမမွေးဖွားဘဲ မြုံနေတဲ့ အတွက် လူ့အသိုင်းအဝိုင်းက ကဲ့ရဲ့ခြင်းခံရတဲ့ ဆာရာနဲ့ ဟန္န လိုအမျိုးသမီးတွေကနေ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါ တယ်။ ဘုရားသခင်ဟာ အစ္စရာအဲလ်လူမျိုးတွေရဲ့လွတ်မြောက်ရေးအတွက် အဲဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘ၀ကို အသုံးပြုတော်မူခဲ့ပါတယ်။
ကညာစင် မာရိယာကိုကျတော့ ဘုရားသခင်က ကမ္ဘာလောကရဲ့ကယ်တင်ရှင်ကို မွေးဖွားပေးဖို့ ရွေးချယ်တော်မူခဲ့တယ်။ ကယ်တင်ခြင်းသမိုင်းမှာ မယ်တော်ဟာ အဓိကကျတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာ ပါဝင်နေ ပါတယ်။ မယ်တော်ကို လက်မခံခြင်းဟာ သမ္မာကျမ်းစာကို လက်မခံခြင်းပါပဲ။ မယ်တော်ကို လက်မခံ ခြင်းဟာ ယေဇူးဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းကို လက်မခံတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ မယ်တော်ကို ငြင်းပယ် ခြင်းဟာ သမ္မာကျမ်းစာရဲ့အဓိကသတင်းစကားကို ငြင်းပယ်တာနဲ့ ဘာမှမခြားပါဘူး။
]]အဲဂုတ္တုပြည်၌ရှိသော ငါ၏လူတို့ခံရသော ညှဉ်းဆဲခြင်းကို ငါစေ့စေ့မြင်ခဲ့ပြီ။...သူတို့မြည်တမ်း သောအသံကိုလည်း ငါကြားခဲ့ပြီ}}ဆိုပြီးတော့ သိုးထိန်းဖြစ်တဲ့ မိုးဇက်ကို ထာ၀ရဘုရားမိန့်ကြားခဲ့တဲ့စကား ကို ငြင်းပယ်ခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ဖတ်ရှုခဲ့တဲ့ဧဝံဂေလိကျမ်းမှာ မယ်တော်ရဲ့ဂုဏ်တော်ဧကျူးခန်း ကနေ ပြောပြထားတဲ့ ကြီးမြတ်တဲ့အမှုတော်အကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သိခဲ့ရပါတယ်။
လောကရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက် ကြိုးပမ်းနေကြသူတွေဟာ ဘယ်သောအခါမှ သေဆုံးခြင်းမရှိဘဲ ဘုရားသခင်ရဲ့အနွယ်တော်ဝင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကို ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ပွဲက မီးမောင်းထိုးပြနေပါတယ်။ မယ်တော်မာရိယာဟာ ယနေ့ထက်တိုင် ဆက်လက်ရှင်သန်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ယေဇူးသခင်က ရှင်ယော ဟန်ကို ]]သင့်အမိကို ကြည့်ပါ}}လို့ မိန့်တော်မူခြင်းဟာ ဒီနေ့အထိတိုင်အောင် မယ်တော်ဆက်လက်ပြီး တော့ လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်တဲ့ ကယ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို လွှဲပေးခဲ့ချင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
သမ္မာကျမ်းစာဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့ တရားမျှတတော်မူခြင်းကို ဖော်ပြတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရား သခင်ဟာ ဒုက္ခခံနေရတဲ့သူတွေကို အကြည့်အရှုပြုပြီး မိမိလူမျိုးတော်ရဲ့အသံကို နားညောင်းတော်မူတဲ့ ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ (ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၃)
အဲဒီဘုရားသခင်ဟာ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲက သားမဖွားနိုင်ဘဲ မြုံနေတဲ့ ဆာရာနဲ့ ဟန္နလိုအမျိုး သမီးနှစ်ဦးကနေတစ်ဆင့် မိမိရဲ့နိုင်ငံတော်ကို တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ အစ္စရာအဲလ်လူမျိုးတွေဟာ နှစ် ပေါင်း(၄၀၀)လောက် စာရိတ္တယိုယွင်းပြီး ဝိညာဉ်ရေးလမ်းစဉ်ကင်းမဲ့တဲ့အကျိုးဆက်တွေကြောင့် အကွဲကွဲ အပြားပြားဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖော်ဆောင်ဖို့ အရမ်းကို အရေးကြီးနေပါပြီ။ အဲဒီ အပြောင်းအလဲက ဟန္နကနေတစ်ဆင့် ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ သားမဖွားနိုင်တဲ့ သူ့ရဲ့အဖြစ်က အစ္စရာ အဲလ်တိုင်းပြည်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးအနှစ်သာရဆိတ်သုဉ်းမှုကို ဖော်ညွှန်းခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဟန္နရဲ့ ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းတေးဟာ မယ်တော်ရဲ့ ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းတေးနဲ့ တူပါတယ်။
]]ဆင်းရဲစေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ ရတတ်စေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ ထာ၀ရဘုရားပြု၍ နှိမ့်ချသော အခွင့်၊ ချီးမြှောက်သောအခွင့်ရှိတော်မူ၏။ ဆင်းရဲသောသူကို မြေမှုန့်ထဲကလည်းကောင်း၊ ငတ်မွတ်သော သူကို နောက်ချေးပုံထဲကလည်းကောင်း ချီးမြှောက်၍ မင်းသားတို့နှင့်ထိုင်ရသောအခွင့်၊ ဘုန်းကြီးသော ပလ္လင်ကို အမွေခံရသောအခွင့်ကို ပေးတော်မူ၏။}} (ဓမ္မရာဇဝင်ပထမစောင် ၂း၁-၁၀)
မယ်တော်ရဲ့ ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းတေးဟာလည်း လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းနဲ့တူပါတယ်။
]]ကိုယ်တော်သည် အင်အားကြီးသောသူတို့ကို အရိုက်အရာမှ ချတော်မူ၍ နှိမ့်ချသောသူတို့ကို ချီး မြှောက်တော်မူပြီ။ ကိုယ်တော်သည် ငတ်မွတ်သောသူတို့ကို ကောင်းသောအရာတို့နှင့်ပြည့်၀စေ၍ ကြွယ် ၀သောသူတို့ကို လက်ချည်းသက်သက်လွှတ်လိုက်တော်မူပြီ။}} (ရှင်လုကာ ၁း၄၆-၅၅)
မတူညီတဲ့နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းနဲ့ အမျိုးသမီးနှစ်ဦးကို ဘုရားသခင်က ရွေးကောက်တော်မူခဲ့ပါ တယ်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲက ဟန္နက အသက်ကြီးပြီးတော့ သားမဖွားနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ မယ်တော် မာရိယာကတော့ ကညာစင်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ ဘုရားသခင်က နိမ့်ကျတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကို ကယ်တင်ခြင်းသမိုင်းမှာ ပါဝင်ရမယ့်အခန်းကဏ္ဍတွေ ပေးခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ယောက်စလုံးက သူတို့လုပ်ရ မယ့်အမှုတော်မြတ်ကို ကောင်းကောင်းသိကြပါတယ်။
သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ကို ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက် ]]ငါ၏ဝိညာဉ် သည် ထာ၀ရဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်း၏}}ဆိုပြီး ဂုဏ်တော်ဧကျူးနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့လို့လည်း သူတို့ဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာ မျက်နှာသာရကြတာဖြစ်ပါ တယ်။ သားတော်ယေဇူးဘုရား လူ့ဇာတိအဖြစ်ကို ယူတော်မူတဲ့အချိန်မှာ အဓိကအခန်းကဏ္ဍကနေ ပါ ဝင်ခဲ့တဲ့ မယ်တော်ဟာ ကယ်တင်ခြင်းသမိုင်းမှာ အတူလိုက်ပါဆောင်ရွက်သူ (co redemptrix) ဖြစ်လာခဲ့ ပါတယ်။ မယ်တော်ဟာ ယေဇူးခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှာ တောက်လျှောက်ပါဝင်နေခဲ့သူ တစ်ဦးဖြစ်လာပါတယ်။
မယ်တော်သခင်မဟာ သားတော်ယေဇူးကို မွေးဖွားသန့်စင်ပေးရုံတင်မကဘဲ ယေဇူးသခင်ရဲ့ကယ် တင်ခြင်းလုပ်ငန်းမှာပါ ပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက် သန့်ရှင်းမွန်မြတ်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်လာပြီး အပြစ်မဲ့သန္ဓေယူခြင်း၊ ခန္ဓာရော ဝိညာဉ်ပါ ကောင်းကင်ဘုံကို ပင့်ဆောင်ခံရခြင်း အစရှိတဲ့ ဂုဏ်ပြုချီးမြှောက်ခြင်းတွေနဲ့ ထိုက် တန်သူဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ပွဲတော်ကို အခုပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေအပေါ် အခြေခံပြီး ကျွန်ုပ်တို့နားလည်ရပါ မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ မယ်တော်မာရိယာကိုရော၊ မယ်တော်ရဲ့အမှုတော်ထမ်းဆောင်ခြင်းကိုရော နားလည် ရပါလိမ့်မယ်။
ကက်သလစ်တွေရဲ့ရှေးထုံးသက်သေအရ မယ်တော်ဟာ ယေဇူးဘုရားရှင်ကို လူ့လောကထဲ သယ် ဆောင်လာတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ သန့်ရှင်းမွန်မြတ်သူ၊ လိုက်လျောဖော်ရွေတတ်သူ၊ ကျိုးနွံနာခံတတ်သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မယ်တော်ရဲ့ ]]ဘုရားသခင်အား ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းတေး}} (The Magnificat)ကို ဖတ်ရ တဲ့အခါ ကျွန်ုပ်တို့ အရမ်းကိုပဲအံ့အားသင့်ခဲ့ရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီနေရာမှာ မယ်တော့်ကို ငြိမ်ကုပ်ပြီး ပါးစပ်ပိတ်နေတတ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ မတွေ့ရပါဘူး။ နူးညံ့သိမ်မွေ့သူလို့ ကျွန်ုပ်တို့သိထားတဲ့ မယ် တော်ဟာ ဒီနေရာမှာကျတော့ ပြောစရာရှိတာ ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောတတ်သူရဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပါ တယ်။ မယ်တော်သုံးနှုန်းတဲ့စကားလုံးတွေက အရမ်းကို အားမာန်ပါပြီး နည်းနည်းလေးမှ အလျှော့ပေး မယ့်ပုံမျိုးမတွေ့ရပါဘူး။ ဘုရားသခင်ရဲ့တရားမျှတမှုကို ဖော်ဆောင်တဲ့နေရာမှာ မယ်တော်ဟာ ရှေ့တန်း ကနေ စွန့်စွန့်စားစား တိုက်ပွဲဝင်ပေးမယ့်သူတစ်ယောက်ရဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။
လူ့သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာ နိမ့်ကျတဲ့သူတွေ၊ ဖိနှိပ်ခံရတဲ့သူတွေရှိလာရင် ကျွန်ုပ်တို့ဟာ မယ်တော်ရဲ့ ဂုဏ်တော်ဧကျူးတေးကိုပဲ ပြေးမြင်လာကြပါတယ်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာတော့ အမျိုးသမီးတစ် ယောက်က ပြောတဲ့ အရှည်ဆုံးစကားလည်း မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ ဆင်းရဲတဲ့ ဂျူးအမျိုး သမီးငယ်လေးကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့စကားတွေပါ။
နာဇီတွေရဲ့သတ်ဖြတ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရတဲ့ ဓမ္မပညာရှင် ဂျာမန်ဘုန်းတော်ကြီး Dietrich Bonhoeffer က (The Magnificat) ကို ]]ထိထိမိမိနဲ့ ပြောင်မြောက်စွာ ဖွဲ့ဆိုထားတဲ့ ဂုဏ်တော်ဧကျူးတေးပါပဲ။ ဘယ် တုန်းကမှ မရှိခဲ့ဖူးတဲ့ ခေတ်ပြောင်းတော်လှန်တေးလို့တောင် ဆိုလို့ရပါတယ်}}လို့ မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။
တချို့နိုင်ငံတွေ၊ ဥပမာ အိန္ဒိယ၊ ဂွါတီမာလာ၊ အာဂျင်တီးနား စတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင် (The Magnificat) ကို ဝတ်ပြုခြင်းတွေမှာ လူသိရှင်ကြားမရွတ်ဆိုဖို့ အတင်းအကြပ် တားမြစ်ထားတာမျိုးတောင် တွေ့ရပါတယ်။
ဧဝံဂေလိအသင်းတော်တွေ၊ အထူးသဖြင့် လူဖြူဝါဒစွဲကြီးတဲ့ ဧဝံဂေလိအသင်းတော်တွေဟာ မယ် တော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကို အရေးမပါသယောင် ပြောဆိုကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ မယ်တော်ကို သူငယ်တော် ဖွားမြင်ခန်းထဲက တိတ်တိတ်ကလေးထိုင်နေတဲ့ မီးနေသည်သာသာလောက်ပဲ သဘောထားချင်ကြတယ်။ တကယ်ဆိုရင် မယ်တော်မာရိယာသီကျူးခဲ့တဲ့ ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းတေးဟာ အစောဆုံးထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့ အာဒ် ဝင်တူးသီချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ဒီသီချင်းဟာ ထိထိမိမိနဲ့ ပြောင်မြောက်စွာ ဖွဲ့ဆိုထားတဲ့ ဂုဏ်တော်ဧကျူးတေးဖြစ်သလို ဘယ်တုန်းကမှ မရှိခဲ့ဖူးတဲ့ အာဒ်ဝင်တူးခေတ်ပြောင်းတော်လှန်တေးလို့ တောင် ဆိုလို့ရပါသေးတယ်။ အဲဒီထဲက မယ်တော်ဟာ ကျွန်ုပ်တို့တွေ ရုပ်ပုံကားချပ်တွေထဲမှာ တွေ့မြင်ရ တတ်တဲ့ ညင်ညင်သာသာ သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့နဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့ မာရိယာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။
ကက်သလစ်မဟုတ်တဲ့ ခရစ်ယာန်အတော်များများ၊ အထူးသဖြင့် ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံက ဧဝံဂေလိ အသင်းသားတွေ၊ ဆင်းရဲချို့တဲ့သူတွေကို လောကီကြွယ်၀မှုမက်လုံးပေးပြီး ]ဆွယ်}တရားဟောတတ်ကြတဲ့ ဖာရီဇေဦးလို တရားဟောဆရာတွေဟာ ကယ်တင်ခြင်းသမိုင်းမှာ မယ်တော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍက လုံး၀ကို အရေးမပါသလိုမျိုး ဟောပြောတတ်ကြပါတယ်။ လူတွေကို စည်းစိမ်ချမ်းသာပေးမယ့်အကြောင်း ပြော ထားတဲ့ကျမ်းပိုဒ်တွေကို တွင်တွင်သုံးပြီး ဧဝံဂေလိတရားတော်ကို ဟန်ပြဟောပြောကြတဲ့ ပင်တေကော့စ် အသင်းသားတွေဟာလည်း မယ်တော်ကို လုံးလုံးလျားလျား ပစ်ပယ်ကြတဲ့အပြင် မယ်တော်ရဲ့ဂုဏ်တော် ချီးမွမ်းတေးကိုလည်း မျက်ကွယ်ပြုထားကြပါတယ်။
အကယ်၍ သင်ဟာ ပြည့်စုံကြွယ်၀သူ၊ ဩဇာအာဏာရှိသူ၊ ဒါမှမဟုတ် သူတစ်ပါးကို ဖိနှိပ်ပြီး ကြီးပွားချမ်းသာလာတဲ့သူဆိုရင်တော့ မယ်တော်ရဲ့ ]]ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းတေး}}ကို ]]သတင်းကောင်း}}အဖြစ် လက်ခံဖို့ ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်ကျိုးကိုပဲကြည့်တဲ့ ခရစ်ယာန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ သဘာ၀ပတ် ဝန်းကျင်ကို အလွဲသုံးစားပြုပြီး ကြွယ်၀လာတဲ့ ခရစ်ယာန်တွေ၊ ချို့တဲ့နွမ်းပါးသူတွေကို ကူညီထောက်ပံ့ ပေးဖို့ သတိမရတဲ့ ခရစ်ယာန် လူချမ်းသာတွေအဖို့ကတော့ မယ်တော်ဟာ ဆူးညှောင့်ခလုတ်တစ်ခုလို ဖြစ်နေမှာအမှန်ပါပဲ။
သူတို့အနေနဲ့ မယ်တော့်ကို ဘယ်လိုလုပ်ပြီး လက်ခံနိုင်မှာလဲ။ ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ်တွေနဲ့ သွားလာ ပြီး မိမိတို့ရဲ့တရားတွေကို လှည့်လည်ဟောနေကြတဲ့သူတွေဟာ မယ်တော်ကျူးအေးတဲ့စကားလုံးကို ကြား ရတဲ့အခါ စိတ်နှလုံးချမ်းမြေ့နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ မယ်တော်ဘယ်လိုကျူးအေးခဲ့လဲ ပြန်ကြည့်ရအောင်။
ထာ၀ရဘုရားရဲ့သားသမီးတွေထဲက နိမ့်ကျသူတွေကို မျက်ကွယ်ပြုထားတဲ့ အုပ်ချုပ်သူတွေနဲ့ ချမ်း သာကြွယ်၀သူတွေကို ပြစ်တင်ရှုတ်ချတဲ့ ပရောဖက် ဟေရှာယ၊ ပရောဖက်အာမုတ် အစရှိတဲ့ ဓမ္မဟောင်း ပရောဖက်ကြီးတွေလိုမျိုး မယ်တော်ကလည်း ပရောဖက်ပြုပြီး ဟောကြားခဲ့တာပါ။ မယ်တော်ဟာ တခြား ပရောဖက်တွေလိုပဲ တရားမျှတခြင်းနဲ့ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကြီးစိုးဖို့ တောင်းဆိုနေတာပါ။
မယ်တော်ရဲ့ ]]ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းတေး}}ဟာ နောင်တစ်ချိန်မှာ သားတော် ယေဇူး ဂါလေလေးယ နယ်မှာ ဟောတဲ့တရားတော်ထဲမှ အသေးစိတ်ပြန်ပါလာခဲ့ပါတယ်။
]]ထာ၀ရဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည် ငါ့အပေါ်၌ ရှိတော်မူ၏။ အကြောင်းမူကား ဆင်းရဲ သားတို့အား ဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကို ဟောပြောစေခြင်းငှာ ကိုယ်တော်သည် ငါ့ကို ဆီဖြင့် လိမ်းကျံ တော်မူပြီ။ ချုပ်နှောင်ခံရသောသူတို့အား မျက်စိအလင်းကိုပေးရန်လည်းကောင်း၊ ဖိနှိပ်ခံရသောသူတို့အား ကယ်တင်စေခြင်းငှာလည်းကောင်း ထာ၀ရဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်မင်္ဂလာနှစ်ကို ကြေညာရန်လည်း ကောင်း ကိုယ်တော်သည် ငါ့ကို စေလွှတ်တော်မူ၏။}} (ရှင်လုကာ ၄း၁၈-၁၉)
ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဓမ္မပညာရှင် Warren Carter က အခုလို ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ယေဇူးသခင်ရဲ့ ခေတ်အချိန်က လူဦးရေရဲ့ ၂ရာခိုင်နှုန်း၊ ၃ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကပဲ ချမ်းသာကြွယ်၀ကြပြီး ကျန်တဲ့သူတွေ ကတော့ စားနိုင်သောက်နိုင်ရုံလေးပဲရှိပါတယ်။ မယ်တော်မာရိယာဟာ အဲဒီလိုမမျှမတဖြစ်နေတဲ့ပတ်ဝန်း ကျင်မှာ မွေးဖွားလာခဲ့တာပါ။ မယ်တော်ဟာလည်း ဆင်းရဲတဲ့သူတွေထဲမှာ ပါပါတယ်။ သူကိုယ်ဝန်အရင့် အမာဖြစ်လာတဲ့အချိန်ဟာ ရောမလူမျိုးတွေက သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ဖို့ လုပ်တဲ့အချိန်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ မယ်တော်ဟာ ကီလိုမီတာ(၇၀)ကျော် (မိုင် ၄၀ ကျော်) ကို လမ်းလျှောက်သွားခဲ့ရပါ တယ်။ တချို့တွေဆိုရင် မိုင်ထောင်ချီပြီး လျှောက်ခဲ့ကြရတာပါ။
ဘာမှလိုလေသေးမရှိဘဲ လူတိုင်းလူတိုင်းက ]]ကောင်းကင်ဘုံမေတ္တာ}}ကို အေးအေးလူလူ ရွတ်ဆို နိုင်တဲ့ကမ္ဘာကြီးဖြစ်ဖို့ ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတာကို မယ်တော်က ထင်ဟပ်ပြခဲ့ပါတယ်။ ခရစ်တော်ဟာ လူတွေကို ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆီ ခေါ်သွားဖို့အတွက်ပဲ ကြွလာခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ]]ကိုယ်တော်၏ နိုင်ငံတော်သည် ရောက်ပါစေသော်၊ ကောင်းကင်ဘုံ၌ ဖြစ်သကဲ့သို့ မြေကြီးပေါ်၌လည်း ကိုယ်တော်၏ အလိုတော်သည် ပြည့်စုံပါစေသော်}}ဆိုတဲ့မေတ္တာအတိုင်းဖြစ်ဖို့ ကိုယ်တော်ရှင်ကြွလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
]]လောကကောင်းကင်ဘုံ}}ဆိုတာ မယ်တော်ဖြစ်ချင်စေတဲ့ဆန္ဒပါ။ သမ္မာကျမ်းစာဖြစ်စေချင်တဲ့ပုံစံ လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တရားမျှတမှုရှိတဲ့ကမ္ဘာလောကမျိုးပါ။ သမ္မာကျမ်းစာကို လိုရာဆွဲသုံးကြတဲ့သူတွေ၊ မတရားဖိနှိပ်မှုတွေကို ဝေဖန်ပြစ်တင်ထားတဲ့ကျမ်းချက်တွေကို ပေါ့အောင် ဖော့ပြီး ပြောကြတဲ့သူတွေဟာ မယ်တော်သခင်မကိုလည်း ဇာတ်မြှုပ်ဖျောက်ဖျက်ပစ်ဖို့ ကြိုးစားကြပါတယ်။ နေရဲ့အလင်းရောင်ကို လက် ဝါးလေးနဲ့ သွားကာလို့ ဘယ်လိုမှမရနိုင်ပါဘူး။ ကက်သလစ်မဟုတ်တဲ့ ခရစ်ယာန်တွေရဲ့ စီးပွားရေး နိုင်ငံရေး အတွေးအမြင်တွေကြောင့် လူတွေဟာ ကမ္ဘာလောကကို ဘုရားသခင်ဖြစ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒ၊ မယ် တော်ဖြစ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကို မကြားရတော့ပါဘူး။
]]ယေဇူးသခင်ပဋိသန္ဓေယူတော်မူတဲ့ဝမ်းကြာသိုက်ဟာ မင်္ဂလာရှိတော်မူတယ်}}လို့ မေတ္တာတစ်ပုဒ် မှာ အထပ်ထပ်အကြိမ်ကြိမ် ဖော်ပြထားပါတယ်။ မှန်ပါတယ်။ မယ်တော်ဟာ ]သဟာဖွဲ့ရာသေတ္တာတော်} ဖြစ်ပါတယ်။ မယ်တော်ဟာ ယေဇူးဘုရားရှင်ကို လွယ်ခဲ့တဲ့ ဝမ်းကြာသိုက်ဖြစ်ရုံမကပါဘူး။ ယေဇူးဘုရား ရှင်ရဲ့အသံတော်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တော်ရှင်ရဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းကို ထိရောက်အောင်မြင်စေ တဲ့အသံတော်ဖြစ်ပါတယ်။ အစ္စရာအဲလ်လူမျိုးတွေကို ကျွန်ပြုပြီး အမြတ်ထုတ်ခြယ်လှယ်ခဲ့ကြတဲ့ အခွင့် ထူးခံလူတန်းစားကြောင့် ပြည်သူတွေရဲ့ (၉၇)ရာခိုင်နှုန်းလောက် ချွတ်ခြုံကျနေတဲ့အချိန်မှာ အဖိနှိပ်ခံသူ တွေဘက်က ထိုးဖောက်ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ လက်သီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆိုရင်လည်း ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့် ကမ္ဘာကြီးမှာ မတရားမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ကို ဒီကိုဗစ်ကပ်ရောဂါဆိုးကနေ အကာအကွယ်ပေးဖို့ မယ်တော်ကို ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းကြပါ တယ်။ ဆင်းရဲချို့တဲ့သူတွေဟာ အခြားသောကပ်ဆိုးတွေဖြစ်တဲ့ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးတဲ့ကပ်ဆိုး၊ အနိုင်ကျင့် ခံရတဲ့ကပ်ဆိုး၊ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကို တန်ဖိုးမထားတဲ့ကပ်ဆိုးတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုလည်း အလူးအလဲခံနေကြ ရတယ်လို့ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးက ထောက်ပြခဲ့ပါသေးတယ်။ လူသန်းပေါင်း (၁၂၀)လောက်ဟာ အလုပ် အကိုင်တွေဆုံးရှုံးရတဲ့အတွက် စားရမဲ့ သောက်ရမဲ့အခြေအနေကို ရောက်နေကြပါပြီ။ ကိုဗစ်ကပ်ကာလ နောက်ထပ်တစ်လကြာလာတာနဲ့အမျှ ငတ်လို့သေတဲ့အရေအတွက်က ရောဂါဖြစ်လို့ သေတဲ့အရေ အတွက်ထက် ပိုများလာပါတော့မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ပထမဆုံးမိဘတွေကို ပေးအပ်ခဲ့တဲ့၊ ကောင်းချီးနဲ့ပြည့်တဲ့၊ ကမ္ဘာကြီးဟာ အာဏာရှင်၊ ဓနရှင်တွေ ကျက်စားရာရပ်ဝန်းလိုဖြစ်နေပါပြီ။ လူဦးရေရဲ့(၁)ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိတဲ့ ချမ်းသာကြွယ်၀ သူလူတန်းစားက တစ်ကမ္ဘာလုံးရဲ့ ချမ်းသာမှု(၆၀)ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြပါတယ်။ သူတို့ ထဲက တချို့ဟာ ကမ္ဘာမြေရဲ့သဘာ၀သယံဇာတတွေကိုလည်း စိတ်ကြိုက်အမြတ်ထုတ်ပြီး ချမ်းသာလာကြ တာပါ။
ပြည်သူတွေကို အဆိုးဝါးဆုံးခြိမ်းခြောက်နေတာကတော့ မတရားမှုမှာ မွေ့လျော်တဲ့ အာဏာရှင် ခေါင်းဆောင်တွေပါပဲ။ အဲဒီလိုမတရားမှုတွေကြောင့် သန်းပေါင်းများစွာသောလူတို့ဟာ အခုကပ်ရောဂါ ကာလအတွင်းမှာ သေဆုံးသွားရနိုင်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် အဲဒါအတွက် ဖြေဆေးက ဘယ်မှာလဲ။
ဖြေဆေးကတော့ ]]တရားမျှတ}}ပါပဲ။ အဲဒီအဖြေက သမ္မာကျမ်းစာထဲ ရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အဖြေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သမ္မာကျမ်းစာထဲမှာ ဘုရားသခင်ဟာ တရားမျှတမှုရဲ့အရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ လည်း ကြီးမြတ်တဲ့ပရောဖက် ယောဟန်ဘတ္တစ္စတားရဲ့မိခင် ဧလိဇဘက်နဲ့တွေ့တဲ့အခါ နှိမ့်ချတဲ့ကညာစင် နာဇရက် သမီးပျိုလေးက တရားမျှတမှုအကြောင်းကို ကြွေးကြော်ခဲ့တာပါ။
မယ်တော်သခင်မ ကောင်းကင်ဘုံကို ပင့်ဆောင်ခံရခြင်းပွဲနေ့မှာ ကျွန်ုပ်တို့မှတ်သားရမယ့်အချက် တစ်ခုက ကျွန်ုပ်တို့အနေနဲ့ ဘုရားသခင်ကို ပိုပြီးသိလာအောင် သမ္မာကျမ်းစာကို ဖတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်ဟာ ဆင်းရဲချို့တဲ့သူ၊ ဖိနှိပ်ခံရသူတွေဘက်က ရပ်တည်တယ်ဆိုတာကို ကျွန်ုပ်တို့နားလည်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ အတိဒုက္ခရောက်နေသူတွေကို ကူညီဖေးမချိန်မှာ ဘုရားသခင်ကို မြင်တွေ့ရသူတိုင်းဟာ လောကကမ္ဘာမှာ ကောင်းကင်ဘုံကို တည်ဆောက်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သက်ရှိထင်ရှားရှိနေချိန်မှာ ကောင်းကင်ဘုံကို ရောက်နေသလိုမျိုးခံစားရအောင် လုပ် ဆောင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာဖို့ ခွန်အားသတ္တိကို ပေးသနားတော်မူပါမည့်အကြောင်း အမိမယ်တော်ထံ ကျွန်ုပ်တို့ အတူတကွ ဆုတောင်းကြပါစို့။
Mary the maiden from Nazareth was raised to the pinnacle of glory today. The human family joins her in her blessings. She is celebrated by the great English poet as ‘ our tainted nature’s solitary boast;
At the end of her earthly life, she was assumed body and soul into heaven. It was indeed fitting that no decay would touch her body because she had given birth to Jesus – the Lord of yesterday, today and tomorrow - and also because she was sinless. She was immaculately conceived and remained sinless throughout her life. Death is the result of sin as Scripture tells us (Rom 6:23) so therefore she was assumed body and soul to heaven at the end of her earthly life.
One of the titles we give to our Lady is Ark of the Covenant and our first reading opens with John’s vision of heaven in which he sees something which would startle his contemporaries – he sees the Ark of the Covenant and he sees :
This feast comes amidst the ravages ofapandemic. The pandemic is the dragon waiting to destroy lives. We stretch our hands to Our Mother today to save us. As the COVID started its menacing dance of death, Pope Francis offered the human family to the protection of Our Mother. Let our Mother whose body was taken without any damage totally to heaven, intercede with the Living God, to protect all of us. Let all the bodies which are invaded by the virus be touched by the prayer of our Immaculate Mother. Let the Mother who stood at the foot of the Cross, stand with our brothers and sisters, the front line health workers and bless him. The mother who urged her Son to change water into life-giving Wine in the marriage at Cana, made him touch the blood of millions of affected people, cleanse their blood
We pity those non-Catholic Christians who chose to devalue Mary, who was extolled by Elizabeth as ‘mother of My Saviour.’ Mary is humanity’s eternal interceder.
In the Old Testament, barren women were blessed by God asasign of his blessing of Israel. In the New Testament, it is not the barren woman, butavirgin. In the life of the Virgin, Mary God intervenes to bring Saviour to the world. Mary is an integral part of Salvation history. Denying Mary is denying the Bible, Denying Mary is denying the mission of Jesus. Rejecting Mary is the rejection of the central message of the Bible. It is rejecting the message of Yahweh who told the shepherd Moses: “ I heard the cry of my suffering people, the slaves of Egypt.”
Today’s Gospel tells us the great mission proclamation by Mary through her Magnificat. Today’s feast reminds us of those who struggle for the salvation of the world ‘ never die’ but become part of God’s family. Mary lives today. When Jesus offered Mary to John as ‘ Behold your mother,’ he offered to humanity for its salvific work, which continues today.
The Old Testament God isaGod of Justice. God who takes side with the suffering people. This message of salvation comes through the barren women like Hannah. She articulates this message through her Song :
Two women, two different contexts, Hannah of the old testament was old and sterile, Mary wasavirgin and pure. God chose these ‘ lowly’ to be vessels of salvation. And both understood the mission well.
Because they did God’s mission, both could say ‘ My Soul Glorifies the Lord,’
That is the reason they found favour with God. Mary who was instrumental in the incarnation of Son Jesus has beenaco redemptrix. Participated in the salvific mission of Jesus Christ.
How can they accept Mary? When they preach their Gospel flying across in the custom made private planes, their heart will sink if they hear her words :
Which her son Jesus would castigate later saying :
It is easier foracamel to go through the eye ofaneedle than forarich person to enter the Kingdom of God!” ( Mt: 19:24).
Her Magnificat would be articulated later by her son in his Galilean manifesto :
to proclaim the year of the Lord’s favour (Lk 4: 18-19)
Mary echos the dream of God,aworld without want, where everybody can pray “ Our Father who art in heaven.’ Christ did not come to take people to heaven only. He came so that ‘ Thy Kingdom Come, thy will be done on earth as it is done in heaven.”
Very oftenaprayer said: “Blessed is the womb of Jesus” Yes she is the Ark of the Covenant but she was NOT only the womb of Jesus, but she was also the VOICE of Jesus. The Voice that articulated his Mission. The fist that rose against the Roman occupation and the looting of Israel by the cronies, that left nearly 97 per cent of its people in utter poverty.